By radiosomit.com September 25, 2021
Akhriso Liiska golaha wasiirada Cusub ee Oromiya Madaxweyne Shimalis abdisa ayaa soo dhisay xukuumadiisa maamuli doonta Oromiya 5-ta sanee soo socota. 1:- mudane Shimalis Abdisa Madaxweyne.2:-mud.Awelo Abdi Madaxweyne Ku xigeen3:- Fiqaadhu Tasama:- Wasiirka Madaxtooyada Oromiya.4:-Dr Girma Amante ku magacaban Madaxweyne ku xigeen.5:-marwo Maskaram debebe Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Dakhliga6:-mudane Addisu Araga madaxweyne ku xigeenka dhanka isu duwaha oromiya7:-mudane Abdiraxman Abdala Madaxweyne ku xigeenka dhanka horumarinta reer Guuraaga.8:-mudane Abdikariim Mullu:- isu duwaha Arimaha bulshada.9:-Abera Warquu wasiirka beeraha iyo Qayraadka Dabiiciga.10:-marwo Adunye Axmed xeer ilaaliyaha guud ee Oromiya.11:-Shaafi Xusseen:- Hogaanka Nabad galyada Oromiya.12:-Eng Milyon Baqele:- Wasiirka biyaha iyo tamarta.13:-Mudane Tolosa Gedafe wasiirka…
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in loo sheegay in ay ku qasbantahay in ay la timaado uu yaraan dalab 45 milyan oo euro hadii ay doonayso saxiixa xiddiga Sevilla ee Youssef En Nesyri marka la gaadho suuqa January. Gunners ayaa la rumeysan yahay inay xiddiga reer Morocco u calaamadsatay badalka macquulka ah ee xiddiga Alexandre Lacazette kaas oo la filayo in uu isaga tago garoonka Emirates Stadium. En Nesyri ayaa dhaliyay labo gool waxaana uu caawiyay labo kale Lix kulan oo uu u saftay Sevilla xilli ciyaareedkan, halka uu 32 jeer shabaqa soo taabtay 84 kulan oo uu u…
Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga kooxda West Ham ee Jarrod Bowen Si ay ugu xoojiso weerarkeeda qaybta dambe ee xilli ciyaareedka. Liverpool ayaa isku diyaarinaysa in ay lumiso xiddigaha Salah iyo Mane waxana ay doonaysaa xiddig weerarka ku fiican si ay u sii ciyaarsiiso inta ay labada xiddig ku maqanyihiin koobka Africa bilowga bisha. Klopp ayaa maamulka kooxdiisa u sheegay in ay u keenaan xiddiga 24 jirka ah si uu u adeegsado inta ay labada xiddig ka maqan yihiin waxana ay kooxdiisu haatan diyaarinaysaa dalab 20 milyan ah sida…
Shaxda Rasmiga Ah kooxaha Chelsea Vs Man City &Man United Vs Aston Villa: Ayaa Ku Bilowday Shaxda Kulamada.
Waxa la ciyaari doonaa laba kulan oo muhiim ah kana tirsan horyaalka premier League kana tirsan todobaadkii 6-aad ee horyaalka. Kulanka ugu xiisaha badan ayaa ah kulanka dhexmari doona kooxaha Chelsea iyo Man City kana dhici doona Stamford Bridge kulan labada kooxood isha ku hayaan 3-da dhibcood. Dhanka kale Man United ayaa marti galin doonta kooxda Aston Villa kulan ka dhici doona Old Trafford kulan uu Cristiano Ronaldo isha ku hayo in uu sii wado qaab ciyaareedkiisa fiican. Shaxda Rasmiga Ah Ee Chelsea Vs Man City: Chelsea: Mendy, James, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kante, Kovacic, Werner, Lukaku Kaydka: Kepa, Thiago Silva,…
Maxa sababay cabsida Pep u qabo…?
Thomas Tuchel ayaa u muuqda mid haya qoriga Pep Guardiola marka loo eego in uu tababaraha reer Germany ka rikoodh fiicanyahay dhigiisa reer Spain kulamada tooska ah. Chelsea iyo Tuchel ayaa garaacay Man City iyo Pep Guardiola final-kii champions League laakiin kulankaas ayaan ahayn markii ugu horaysay ee uu Tuchel kabaha la dulmaray. Tan ilaa markii uu Tuchel yimid chelsea labada kooxood ee Chelsea iyo Man City ayaa kulmay 3 kulan tartamada oo dhan iyada oo chelsea garaacday kooxda Pep Guardiola kulan kasta. Kulankii ugu horeeyay ayaa ahaa kulankii 1/0 ahayd ee ay chelsea la ciyaartay Semi-final-ka FA Cup-ka ka…
By radiosomit.com September 24, 2021
Qarax is-miidaamin oo qof naftiisa hallige ah uu geystay ayaa goordhaw ka dhacay agagaarka Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, mana jiro khasaare uu geystay qofka isqarxiyey, sida uu shaaciyey Taliska Booliska Soomaaliya. Afhayeenka Booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri, “24-09-2021 Abaaro 15:03 PM waxaa Qarax ismiidaamin qof naftii halliga ah isku qarxiyey inta u dhaxaysa Isbitaal Madiina iyo Villa Baydhaba, ma jiraan wax khasaare ah ee uu geystay qaraxaas, marka laga reebo qofka naftiisa haligay.”
Mudaharad ay hormuud ja tahay jaliyada Somalida ee dalka Canada…
Muslimiinta gobolka Alberta ee dalka Canada oo ay Soomaalidu qeyb ka yihiin ayaa wada kulammo ay ugu tashanayaan Islaam naceybka oo ku soo badanaya gobolkaasi. Arrintaan ayaa timid kadib markii dhowr dumar oo saddex kamid ah ay Soomaali yihiin dhibaatooyin la xiriira naceybka loogu geystay gobolkaasi. Dowladda Federaalka iyo tan gobolka Alberta ayaa ku celceliya in naceybka uusan meel ugu bannaaneyn Canada. Soomaalida kunool gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa todobaadyadii la soo dhaafay dareemayay cabsi dhanka amniga ah kadib markii gobolkaas ay ku bateen dadka muujinaya islaam naceybka.
Gobolka Shabeellaha Hoose oo qarax xoogan ka dhacay …
Qaraxa oo jugtiisa laga maqlay meelo kamid ah Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa Maanta barqadii waxaa uu ka dhacay inta u dhaxeeysa degmada Afgooye iho degaanka Mareereey ee Gobolkaasi Shabeellaha Hoose. Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso ayaa goobjoogayaal sheegeen in lala eegtay gaari ay saarnaayeen Ciidamo ka torsan dowladda oo ka yimid dhinaca degaanka Mareereey kuna soo wajahnaa degmada Afgooye. Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in qaraxa uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah sidoo kale Ciidamada qaraxa kadib ay fureen rasaas farabadan. Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada dowladda ee qaraxa…
Madaxweynaha Jabuuti kudbadee u ka jeediyey Qaramada Midoobay Kawar xaaladaha Soomaaliya & Itoobiya
Maxkajira malahan in France ay bixineyso kursigeeda…
France ayaa beenisay warbixin maanta lagu daabacay wargeyska Britain ee Daily Telegraph oo sheegeysay inay kursigeeda joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee QM ay ku wareejineyso Midowga Yurub. Wargeyska oo soo xiganaya xubin ka tirsan baarlamanka Yurub ayaa sheegay in France ay ka fakari doonto in kursigaas ay ku beddelato in dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub ay taageeraan dhismaha Ciidan Yurub ah, iyo isbeddel lagu sameeyo habka ururka u diyaariyo siyaasaddiisa arrimaha dibedda. “Waxaan si rasmi ah u beenineynaa arrintan. Kursiga waa keena, wuxuuna ahaan doonaa sidaas,” waxaa sidaas yiri afhayeen u hadlay madaxtooyada Fanarsiiska. “Waxaan Midowga Yurub ula…